ता’लिवानको तृ’ष्णा मेटाउन घर-घरबाट युवती उठाउँदै गु’लाम बनाउँदै ! – Nepal Online Khabar
ता’लिवानको तृ’ष्णा मेटाउन घर-घरबाट युवती उठाउँदै गु’लाम बनाउँदै !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 625
काठमाडौं : अमेरिका तथा नेटो सै’निक अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसंगै ता’लिवानले आफ्नो द’बदबा बढाएको छ । ता’लिवानले आफ्नो चलखेल सुरु गरेको छ । ता’लिवानको बढ्दो प्र’भावबाट सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानका महिलाहरु प्र’ताडि’त बन्न थालेका छन् ।
द सन वेबसाइटको रिर्पाेट अनुसार ता’लिवानको ब्यक्तिहरुले घर घरमा गएर केटी तथा महिलाहरुलाई खोजी गर्दै उनीहरुलाई से’ क्स गु-ला’म बनाईरहेको छ । ता’लिवानका नेताहरु अब अफगानिस्तानका युवतीहरुलाई अ-प-ह’र’ण गर्दै उनीहरुलाई ज-ब’र’ज’स्ती बिबाह गरेर से’क्स गु’ला’म बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
ता’लिवानको यो ह’र्कत इराक तथा सी’रियामा रहेको इ’स्लामिक स्टे’टको क्रु-र’ता’संग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । उनीहरु महिलाहरुलाई गु-ला’म बनाउनका लागि एकदमै कु’ख्या’त रहेका छन् ।ता’लिवा’नले नियन्त्रणमा लिएको क्षेत्रबाट उनीहरुले १५ बर्ष देखी ४५ बर्ष सम्मका महिलाहरुको लि’स्ट ता’लिवा’नलाई बुझाउन आ’ग्रह गरेको थियो ।
जबकी उनीहरुसंग आफ्नो केटाहरुको बि’बाह होस् भन्ने ता’लिवा’नको चा’हना थियो ।रिर्पाेटका अनुसार अब ता’लिवानले ज-ब’र-स्ती यी उमेर समुहका कि’शोरी तथा महिलाहरुलाई घरबाटै उ’ठाईरहेको छ । ब्लु’मबर्गको रिर्पाेट अनुसार यस प्रकारको ह’र्कत संगै ता’लिवानको क’ब्जामा रहेको क्षेत्रका महिलाहरुका लागि एकदमै चु’नौती ब’ढेर गएको छ ।
Prev‘प्रचण्ड राष्ट्र कै समस्या हो, मैले सु’धार्न खोजे तर सकिन’ !
Nextअमेरिकामाथि २००१ काे ह’मलामा लादेन संलग्न भएको प्रमाण छैन :- तालिवान !
पीएसजीको सानदार जित, घरेलु मैदानमा मेस्सीलगायतका खेलाडीको स्वागत ।
नेपाल आउँदै अमिताभ, अनुपम, बोमन र परिणिती ।